Nwere ike ịrịọ nbanye gị na beta emechiri emechi Mario Kart Tour | Gam akporosis
Mgbe anyị matara nke ahụ Mario Kart Tour ga-adanye na gam akporo na ọkọchịUgbu a anyị maara na Nintendo na-ekwe ka arịrịọ ịbanye beta mechiri emechi. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma, ị nwere ike ịnwale beta mechiri emechi nke otu egwuregwu kachasị atụ anya nke ụlọ ọrụ Japan maka afọ a na ngwaọrụ mkpanaka.
Maka nke a, anyị ga-eme ya i aomi koodu QR site na njikọ anyị nyere n'okpuru nke ahụ ga - enyere gị aka ịrịọ ntinye aka na Mario Kart Tour beta. A oké novelti nke egwuregwu na-aga ịbụ otu n'ime afọ maka gam akporo igwe.
E wezụga ịnwe ngwa iji nyochaa koodu QR, ị ga- chọrọ akaụntụ Nintendo ma biri na United States na Japan. Yabụ na ọnweghị ihe na-eme ịnwale ma yabụ ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma, ị nwere ike ịlụ ọgụ megide Yoshi na akụkọ ifo ndị ọzọ Nintendo edere na kart ha.
Weebụsaịtị iji rịọ ntinye aka na Mario Kart Tour mechiri beta bụ nke a. Ga-enyocha QR code, banye na akaụntụ Nintedo gị pịa bọtịnụ arịrịọ.
Tonweta ụdị beta ga-adị ruo Mee 7 maka onye ọ bụla bi na United States ma ọ bụ Japan. Beta a na-eme atụmatụ ịmalite na Mee 22 wee kwụsị na June 4. Kedu ihe dị ka izu abụọ, ọ bụ ezie na Nintendo kwadoro na ụbọchị ndị ahụ nwere ike ịdị iche.
Niile beta echekwara agaghị echekwa maka igba egbe na micropayments agaghị arụ ọrụ n'oge a. Ná ngwụsị nke Mario Kart beta, ị ga-enwe ike ịzaghachi otu ụdị iji nye Nintendo nzaghachi dị mkpa.
Nnukwu nnabata na-echere anyị maka oge okpomọkụ a site na otu ụlọ ọrụ amaara ama na mbara ụwa na nke ahụ ha na Mario Kart Tour ha ga-enwe nnukwu ohere ọzọ imebi ihe niile. Anyi bukwa na-eche Dr. Mario World.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Nintendo Ugbu a Na-anabata Ngwa maka Mario Kart Tour Emechiela Beta
Anyị na-enyocha nsogbu akwụkwọ mpịakọta ebubo nke Huawei P30
O kwere omume ugbu a igwu egwu na Thanos na mmelite ohuru ohuru